March 2016 | Language Century Language Century
10:44 PM E-Joke , English
ဒီနေ့အတွက် ဘာသာပြန်ဟာသလေးကို ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ရယ်မောခြင်းဖြင့် ဘ၀အမောများ ပြေနိုင်ကြပါစေ။
Never Old To Learn ပညာလို အိုသည်မရှိ
Harry came to his mother one morning while she was having her breakfast, and said to her, "No one at my school likes me, Mother. The teachers don't, and the children don't. Even the cleaners and the bus drivers hate me."
တစ်ခုသော နံက်ခင်းလေးမှာ ဟယ်ရီက သူ့မိခင် ထမင်းစားနေစဉ် အိမ်ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူမကို "အမေ ကျွန်တော်ကို ကျွန်တော့်ကျောင်းက ဘယ်သူကမှ မကြိုက်ကြဘူးဗျာ။ ဆရာတွေကလဲ မကြိုက်။ ကလေးတွေကလဲ မနှစ်သက်။ သန့်ရှင်းရေးသမားတွေနဲ့ ကားမောင်းသူတွေကတောင် ကျွန်တော့်ကို မုန်းကြတယ်ဗျာ။"
"Well, Harry," his mother answered, "perhaps you aren't very nice to them. Ifafew people don't likeaperson, he or she may not be responsible for that; but ifalot of people don't, there's usually something wrong, and that person really needs to change."
သူ့မိခင်က "ဟယ်ရီ သားက သူတို့အပေါ်မှာ မကောင်းလို့ ဖြစ်မှာပေါ့ကွယ်။ လူတစ်ယောက်ကို လူအနည်းငယ်က မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလူမှာ ဒီအတွက် ဘာတာဝန်မှ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူအများက မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ခုခု မှားနေပြီ။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီလူဟာ ပြောင်းလဲဖို့ တကယ်လိုအပ်နေပြီ သား" လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
"I'm too old to change," Harry said. "I don't want to go to school."
ဟယ်ရီက "ကျွန်တော်က ပြောင်းလဲဖို့ဆို အသက်ကြီးနေပြီ။ ကျောင်းကိုလဲ မသွားချင်ဘူး။"
"Don't be silly, Harry," his mother said, going towards the garage to get the car out. "You have to go. You're quite well, and you still havealot of things to learn. And besides that, you're the headmaster of the school."
သူ့မိခင်က ဂိုဒေါင်ကို ကားထုတ်သွားရင်း ပြောခဲ့တယ်။ "ဟယ်ရီ သား မမိုက်မဲစမ်းပါနဲ့ကွယ်။ သား သွားရမယ်။ သားက လူတော်ပါ။ ပြီးတော့ သင်ယူစရာတွေလဲ အများကြီး ရှိသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် သားက ဒီကျောင်းရဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးလေကွယ်။"
Translated by Min Min Htaik
1. Cleaner = (n) သန့်ရှင်းရေးသမား။
2. Perhaps / may be) = (adv) ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်။/ဖြစ်လိုဖြစ်ငြား။
3. Responsible = (adj) တာဝန်ရှိသော။/တာဝန်မကင်းသော။
4. Wrong = (adj) မှားသော။
5. Silly = (adj) မိုက်မဲသော။/နုံအသော။
6. Garage = (n) ဂိုဒေါင်။/မော်တော်ကားရုံ။
7. Besides / moreover) = (adv) ထို့အပြင်။/ထိုမှတစ်ပါး။
8. Headmaster = (n) ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး။
For more information - English Language & General Knowledge
6:51 PM C-Sentence , Chinese
စားကြသောက်ကြတဲ့အခါ အပြန်အလှန်ပြောဆိုကြတဲ့ စကားပြောပုံစံ ၀ါကျတိုလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စားကြသောက်ကြရင်း တရုတ်စာလေ့လာကြတာပေါ့။
Cháng chang zhè ge, hěn hǎochī.
ချန်းh(င်)ချန်h(င်) ကျဲ့hကဲာ့ ဟဲင်းဟောင်ချီးh
ဒါလေး မြည်းကြည့်ပါလား၊ စားလို့ကောင်းတယ်။
Yǒu diǎn dàn.
Zěnme zhème xián?
ဘာလို့ ဒီလောက် ငန်တာလဲ။
Fàncài yě dōu zuò hǎo le.
ထမင်းဟင်းတွေ အားလုံး ချက်ပြီးပြီ။
Kuài diǎn shuō xiǎng chī shénme?
ဘာစားချင်လဲ မြန်မြန် ပြောပါ။
Duō lǎi chī zǎocān ba.
အားလုံး မနက်စာ လာစားကြပါ။
Gěi wǒ mǎi fàn ba, wǒ è le.
ကေးဝေါ် မိုင်ဖန့်fပါ့ ဝေါ်အဲာ့လဲာ့
Wǒ chī wǔfàn le.
ငါ နေ့လည်စာ စားပြီးပြီ။
Zài chī yí biàn ba.
Zhǔnbèi hǎo zúgòu de diǎnxīn hé shuǐguǒ.
ကျွင်hပေ့ဟောင် ဇူzကို့တဲ့ တျန်ရှင်းဟဲယ် ရွှေးhကော်
သစ်သီးနဲ့ စားစရာတွေကို လုံလောက်အောင် ပြင်ထားပါ။
Yào bú yào xiān chī fàn?
ထမင်း အရင် စားမလား။
Zài hē jiǔ ma?
Xiǎng hē dòunǎi ma?
စားကွသောကျကွတဲ့အခါ အပွနျအလှနျပွောဆိုကွတဲ့ စကားပွောပုံစံ ဝါကတြိုလေးတှကေို တငျပေးလိုကျပါတယျ။ စားကွသောကျကွရငျး တရုတျစာလလေ့ာကွတာပေါ့။
ခနျြးh(ငျ)ခနျြh(ငျ) ကြဲ့hကဲာ့ ဟဲငျးဟောငျခြီးh
ဒါလေး မွညျးကွညျ့ပါလား၊ စားလို့ကောငျးတယျ။
ဘာလို့ ဒီလောကျ ငနျတာလဲ။
ထမငျးဟငျးတှေ အားလုံး ခကျြပွီးပွီ။
ဘာစားခငျြလဲ မွနျမွနျ ပွောပါ။
အားလုံး မနကျစာ လာစားကွပါ။
ကေးဝျေါ မိုငျဖနျ့fပါ့ ဝျေါအဲာ့လဲာ့
ငါ နလေ့ညျစာ စားပွီးပွီ။
ကြှငျhပဟေ့ောငျ ဇူzကို့တဲ့ တနျြရှငျးဟဲယျ ရှေးhကျော
သဈသီးနဲ့ စားစရာတှကေို လုံလောကျအောငျ ပွငျထားပါ။
ထမငျး အရငျ စားမလား။
10:51 PM C-Knowledge , Chinese
တရုတ်နှစ်ကူး ပုံပြင် 年的故事
[ ၂၀၁၃နှစ်ကူးမှပြန်လည်ကောက်နှုတ်ပါသည်။ ]
ညအခါ (နရန်)ထွက်လာတော့ အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း ထိန်လင်းပီး နေရာတိုင်း ဗျောက်သံဆူညံနေတာ တွေ့ရတော့တောနက်ထဲပြန်ပြေးဝင်သွားပါတယ်။
( ကော့နရန် ) သို့ ( ချွန်းကျယ် ) နွေဦးပွဲတော်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
တရုတျနှဈကူး ပုံပွငျ 年的故事
[ ၂၀၁၃နှဈကူးမှပွနျလညျကောကျနှုတျပါသညျ။ ]
ညအခါ (နရနျ)ထှကျလာတော့ အိမျတိုငျးအိမျတိုငျး ထိနျလငျးပီး နရောတိုငျး ဗြောကျသံဆူညံနတော တှရေ့တော့တောနကျထဲပွနျပွေးဝငျသှားပါတယျ။
( ကော့နရနျ ) သို့ ( ခြှနျးကယျြ ) နှဦေးပှဲတျောလို့ ချေါပါတယျ။
Credit - 杨英和
For more information - တရုတ်စာနှင့်စကားပြော အချင်းချင်း မျှဝေကြရအောင်
တရုတ်ရိုးရာ ၁၂ နှစ် ရာသီခွင်။
9:13 PM C-Knowledge , Chinese
တရုတ်ရိုးရာ ၁၂ နှစ် ရာသီခွင် 十二生肖
[ ၂၀၁၄နှစ်ကူးပိုစ့်များမှပြန်လည်ကောက်နှုတ်ထားပါသည်။ ]
တရုတ်တွေအသက်မေးတဲ့အခါမှာ အသက်ဘယ်လောက်လဲ။ဘယ်နှစ်ခုနှစ်မွေးတာလဲဆိုတာထက် သင်ဘာနှစ်ဖွားလဲ၊ ဘာအကောင်ဖွားလဲဆိုတာအဓိကထားမေးကြတယ်။
သူတို့လုပ်မှပဲ လူကနေတိရိစ္ဆာန်နဲ့ ယှဉ်နေရသေးတယ်။
မင်္ဂလာဆောင်ရင်လဲ ဘာနှစ်ဖွားကောင်နဲ့ ဘာနှစ်ဖွားနဲ့ဆိုမတည့်ဘူးရှိသေး၊ ရှုပ်ယှက်တော့ခက်နေတာပဲနော်။
ထားပါတော့။ လိုရင်းက၁၂ရာသီဖွားကောင်လေးတွေရဲ့ ပုံပြင်လေးပြောချင်လို့။
鼠 shǔ ကြွက်、牛 niú နွား、虎 hǔ ကျား、兔 tù ယုန်、龍 lóng နဂါး、蛇 shé မြွေ、馬 mǎ မြင်း、羊 yáng ဆိတ်、猴 hóu မျောက်、雞 jī ကြက်，狗 gǒu ခွေး，猪 zhū ၀က် အစဉ်တိုင်းပေါ့။
ရှေးတုန်းက လူတွေက နှစ်၊ လ၊ ရက် အချိန်နာရီတွေ မတွက်တတ်ပါဘူး။
鼠 shǔ ကြွက်、牛 niú နွား、虎 hǔ ကျား、兔 tù ယုန်、龍 lóng နဂါး、蛇 shé မြွေ、馬 mǎ မြင်း、羊 yáng ဆိတ်、猴 hóu မျောက်、雞 jī ကြက်，狗 gǒu ခွေး，猪 zhū ၀က် အစဉ်တိုင်းပေါ့။
ကြေငြာပြီးချင်းမှာတော့အိပ်ပုတ်ကြီးနေတဲ့ကြောင်ဟာကမန်းကတန်းသုတ်တီးသုတ်ပြာနှင့်ရောက်လာပြီးမှ .. ဟဲ့ဟဲ့ပြောကြအုန်းငါကောဘယ်နံပါက်ကလိုက်လဲပေါ့။အဖြေလဲသိရရောကြောင်ဟာကြွက်ထားပစ်ခဲ့လို့သူနောက်ကျတာ မိတ်ဆွေမပီသတဲ့ကြွက်ဆိုပြီး ရန်ငြီုးဖွဲ့ခဲ့တာယနေ့ထက်တိုင်ပေါ့။
ဂျက်ကီချန်း (ချန်လုံ) သရုပ်ဆောင်တဲ့ Chinese Zodiac မှာ ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ ပျံ့နှံ့လေလံတင်ခံရတဲ့ ဒီ၁၂ရာသီခွင်ကြေးရုပ်တွေကို ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်ပြန်လည် စုဆောင်းပုံကိုတွေ့ရမှာပါ။
တရုတျရိုးရာ ၁၂ နှဈ ရာသီခှငျ 十二生肖
[ ၂၀၁၄နှဈကူးပိုဈ့မြားမှပွနျလညျကောကျနှုတျထားပါသညျ။ ]
တရုတျတှအေသကျမေးတဲ့အခါမှာ အသကျဘယျလောကျလဲ။ဘယျနှဈခုနှဈမှေးတာလဲဆိုတာထကျ သငျဘာနှဈဖှားလဲ၊ ဘာအကောငျဖှားလဲဆိုတာအဓိကထားမေးကွတယျ။
သူတို့လုပျမှပဲ လူကနတေိရိစ်ဆာနျနဲ့ ယှဉျနရေသေးတယျ။
မင်ျဂလာဆောငျရငျလဲ ဘာနှဈဖှားကောငျနဲ့ ဘာနှဈဖှားနဲ့ဆိုမတညျ့ဘူးရှိသေး၊ ရှုပျယှကျတော့ခကျနတောပဲနျော။
ထားပါတော့။ လိုရငျးက၁၂ရာသီဖှားကောငျလေးတှရေဲ့ ပုံပွငျလေးပွောခငျြလို့။
鼠 shǔ ကွှကျ、牛 niú နှား、虎 hǔ ကြား、兔 tù ယုနျ、龍 lóng နဂါး、蛇 shé မွှေ、馬 mǎ မွငျး、羊 yáng ဆိတျ、猴 hóu မြောကျ、雞 jī ကွကျ，狗 gǒu ခှေး，猪 zhū ဝကျ အစဉျတိုငျးပေါ့။
ရှေးတုနျးက လူတှကေ နှဈ၊ လ၊ ရကျ အခြိနျနာရီတှေ မတှကျတတျပါဘူး။
ကွငွောပွီးခငျြးမှာတော့အိပျပုတျကွီးနတေဲ့ကွောငျဟာကမနျးကတနျးသုတျတီးသုတျပွာနှငျ့ရောကျလာပွီးမှ .. ဟဲ့ဟဲ့ပွောကွအုနျးငါကောဘယျနံပါကျကလိုကျလဲပေါ့။အဖွလေဲသိရရောကွောငျဟာကွှကျထားပဈခဲ့လို့သူနောကျကတြာ မိတျဆှမေပီသတဲ့ကွှကျဆိုပွီး ရနျငွီုးဖှဲ့ခဲ့တာယနထေ့ကျတိုငျပေါ့။
ဂကျြကီခနျြး (ခနျြလုံ) သရုပျဆောငျတဲ့ Chinese Zodiac မှာ ဥရောပနိုငျငံတှမှော ပြံ့နှံ့လလေံတငျခံရတဲ့ ဒီ၁၂ရာသီခှငျကွေးရုပျတှကေို ယဉျကြေးမှုအမှအေနှဈအဖွဈပွနျလညျ စုဆောငျးပုံကိုတှရေ့မှာပါ။
Posted by 楊 英和
For more information - တရုတ်စာနှင့်စကားပြော အချင်းချင်းမျှဝေရအောင်
လို-တို-ရှင်း ၀ါကျတိုလေးများကို လေ့လာကြစို့။
8:47 PM E-Sentence , English
ဒီနေ့လည်း လိုတိုရှင်းဝါကျတိုလေးတွေကို ဆက်လက်လေ့လာလိုက်ကြပါအုံးနော်။ စာရှုသူ မိတ်ဆွေများလည်း ဗဟုသုတများ တိုးပွားကြပါစေ။
1. He committed the cheat/deceit.
> သူက လိမ်လည်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့သည်။
2. Commit it into your memory.
> မင်း မှတ်ထားပေးပါကွာ။
3. This cigarette is mild.
> ဒီဆေးလိပ်က ပျော့တယ်။ (ဆေးပျော့သည်။)
4. I'm on your side.
> ငါက မင်းဘက်ကပါကွာ။
> ငါ မင်းနဲ့အတူရှိတယ်။ (မင်းဘက်ကပါ။)
6. He looks disgust.
> သူက စိတ်ပျက်နေပုံပဲ။
7. I'm looking foranew job.
> ငါက အလုပ်သစ် ရှာနေတယ်။
8. He looks at the wall clock.
> သူက တိုင်ကပ်နာရီကို ကြည့်သည်။
9. I look out of the window.
> ငါ ပြူတင်းပေါက် အပြင်ကို ကြည့်သည်။
10. Look out! (Be careful!)
8:40 PM E-Grammar , English
ဒီနေ့အတွက် လေ့လာစရာ ၀ိဘတ်အသုံးအနှုန်းများကို တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဘာသာစကား လေ့လာနေကြသူများ ဖတ်ရှုမှတ်သားကြပါလေ။
1. Interested in, not for. (adj) စိတ်ဝင်စားသော။
Don't say: She's not interested for her work.
Say: She's not interested in her work.
(သူမက အလုပ်မှာ စိတ်မဝင်စားဘူး။)
2. Take an interest in, not for. (n) စိတ်ဝင်စားမှု။
Don't say: She takesagreat interest for music.
Say: She takesagreat interest in music.
(သူမက ဂီတမှာ အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။)
3. Jealous of, not from. (adj) မနာလိုသော။
Don't say: He's very jealous from his friend.
Say: He's very jealous in his friend.
(သူက သူ့သူငယ်ချင်းကို မနာလို ဖြစ်နေတယ်။)
4. Leave for (a place), not to. (v) ထွက်ခွာသည်။
Don't say: They're leaving to Mandalay soon.
Say: They're leaving for Mandalay soon.
(သူတို့က မန္တလေး ကို မကြာခင် ပြောင်းတော့မယ်။)
5. Live on, not from. (phr-v) နေထိုင်စားသောက်သည်။
Don't say: She lives from his brother's money.
Say: He lives on his brother's money.
(သူက သူ့အစ်ကိုရဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ နေထိုင်စားသောက်တယ်။)
6. Feed on, not from. (v) အမြဲစားသောက်သည်။
Don't say: Some birds feed from insects.
Say: Some birds feed on insects.
(တစ်ချို့ငှက်တွေက ပိုးမွှားတွေကို အမြဲစားသောက်တယ်။)
For more information- English Language & General Knowledge
8:29 PM E-Joke , English
မိမိတို့ရဲ့ဘ၀မှာ လွဲမှားမှုတွေကြုံဖူးကြမှာပါ။ လွဲမှားတိုင်းလည်း မိမိကိုယ်ကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့။ တခါတလေမှာ လွဲချော်သွားတာကြောင့်လည်း မိမိအတွက် အဆင်ပြေမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေတာပါ။
Miss Again (လွဲပြန်ပြီ)
Peter joined the army when he was eighteen, and for several months he was taught how to beagood soldier. He did quite well in everything except shooting. One day he and his friends were practising their shooting, and all of them were doing quite well except Peter.
ပီတာက အသက် ၁၈ နှစ်မှာ စစ်ထဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူက စစ်သားကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် လပေါင်းများစွာ လေ့လာသင်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ သူက သေနတ်ပစ်တာကလွဲရင် ကျန်တာအားလုံးကို တော်တော်ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေဟာ သေနတ်ပစ်လေ့ကျင့်နေခဲ့ကြတာပါ။ ပီတာက လွဲရင် ကျန်တဲ့သူအားလုံးက ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
After he had shot at the target nine times and had not hit it once, the officer who was trying to teach the young soldiers to shoot said, "You're quite hopeless, Peter! Don't waste your last bullet too! Go behind that wall and shoot yourself with it!"
သူက ပစ်မှတ်ကို ကိုးကြိမ် ပစ်ပြီးသည့်တိုင်အောင် တစ်ကြိမ်မှ မထိခဲ့ပါဘူး။ စစ်ထဲဝင်စ စစ်သားငယ်လေးတွေကို သေနတ်ပစ် လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ အရာရှိက "ပီတာ မင်းက တော့ တော်တော်လေးကို မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေပြီ (အသုံးမကျဘူး။) မင်းရဲ့ နောက်ဆုံးကျည်ဆံကိုလဲ အလကား ဖြုန်းတီးမနေနဲ့တော့။ ဟိုနံရံ နောက်ကိုသွားပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်တာ ပစ်လိုက်တော့ကွာ။" လို့ သူ့ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
ပီတာက အရမ်းရှက်ပြီး နံရံ နောက်ကို သွားခဲ့တယ်။ စက္ကန့်အနည်းငယ် ကြာပြီးတော့ အရာရှိနဲ့ တခြား စစ်သားငယ်လေးတွေက သေနတ်ပစ်သံကို ကြားခဲ့ကြတယ်။
"Heavens!" the officer said. "Has that silly man really shot himself?" He ran behind the wall anxiously, buy Peter was all right. "I'm sorry, sir," he said, "but I missed again."
"ဘုရားရေ" လို့ တပြီး "ဟိုအရူးကောင်ကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တကယ် ပစ်လိုက်ပြီလားဟ"။ သူက စိုးရိမ်ကြီးစွာနဲ့ နံရံနောက်ကို ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပီတာကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ သူပြောလိုက်တာက "တောင်းပန်ပါတယ် ဆရာ ကျွန်တော် ဒီတစ်ကြိမ်လဲ လွဲသွားပြန်ပါပြီ။"
1. Join = (v) ဆက်သွယ်သည်။/စစ်ထဲဝင်သည်။
2. Army = (n) စစ်တပ်။
3. Taught (pt of teach) = (v) သင်ကြားခဲ့သည်။
4. Except = (prep) မှတစ်ပါး။
5. Shooting = (n) သေနတ်ပစ်ခြင်း။
6. Practicing = (v-ing) လေ့ကျင့်နေသည်။
7. Shot (pt of Shoot) = (v) သေနတ်ပစ်ခဲ့သည်။
8. Target = (n) ပစ်မှတ်။
9. Hit (pt of hit) = (v) ထိခဲ့သည်။/မှန်ခဲ့သည်။/ရိုက်ခဲ့သည်။
10. Officer = (n) အရာရှိ။
11. Hopeless = (adj) မျှော်လင့်ချက်မဲ့သော။
12. Waste = (v) ဖြုန်းတီးသည်။
13. Bullet = (n) ကျည်ဆံ။
14. Ashamed = (adj) ရှက်သော။
15. Heard (pt of Hear) = (v) ကြားခဲ့သည်။
16. Heavens = (n) ဘုရားရေ။/ကောင်းကင်ဘုံ။
17. Silly = (adj) မိုက်မဲသော။
18. Anxiously = (adv) စိုးရိမ်တကြီး။/အမောတကော။
19. Miss = (v) လွဲချော်သည်။/လွမ်းသည်။
8:21 PM E-Sentence , English
အင်္ဂလိပ်စကားလေ့လာသူများအတွက် အသုံးတည့်နိုင်မယ့် စကားပြောဝါကျတိုလေးများကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေနော်။
1. I have the prejudice on him.
> သူ့ကို ငါ ကြည့်လို့မရတော့ဘူးနော်။
2. Have you got any prejudice?
> မင်း မစားတဲ့အသား ရှိသလား။
3. My side line is teaching.
> ငါ့ရဲ့ လက်ပွားအလုပ်က စာသင်ကြားခြင်းပဲ။
4. My main line is to run my own company.
> ငါ့ရဲ့ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်က ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ အလုပ်ပဲ။
5. She plays trick on me.
> သူမက ငါ့ကို လှည့်စားတယ်။
6. He first make an impression on the girl.
> သူက ကောင်မလေး အထင်ကြီးလာအောင်လုပ်တယ်။
7. He reaches for his gun.
> သူက သေနတ်ကို လှမ်းယူသည်။
8. Can you reach the book on the top shelf?
> မင်း အပေါ်ဆုံး စင်ပေါ်က စာအုပ်ကို လှမ်းယူပေးလို့ရမလား။
9. Medicines should be kept out of reach of children.
> ဆေးတွေကို ကလေးတွေ မမှီတဲ့နေရာမှာ သိမ်းထားသင့်တယ်။
10. He committed the murder.
>> သူက လူသတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၄၇ ။
6:39 PM C-Sentence , Chinese
ဒီလိုဝါကျတိုလေးတွေက စကားပြောတဲ့နေရာမှာ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ ကျက်မှတ်ထားဖို့ကတော့ သင့်တာဝန်ပေါ့နော်။
Dǎsuàn bǎ tā zěnme chùlǐ?
တာစွမ့် ပါထားဇဲင်zမဲာ့ ချုhလီ
Nǐ gànma dānxīn zhèxiē.
နီ ကန့်မာတန်းရှင်း ကျဲ့hရှဲ
မင်းက ဘာလို့ ဒါတွေကို စိုးရိမ်နေတာလဲ။
Tā nàme shuō ma?
သူ အဲဒီလို ပြောလား။
Kànlái hái gēn nǐ shuō nà zhǒng huà.
ခန့်လိုင် ဟိုင်ကဲင်းနီရှောh နာ့ကျုံh(င်)ဟွာ့
ကြည့်ရတာ မင်းကို အဲဒီလို ပြောလိုက်တာပဲ။
Xiànzài ràng wǒ xiāngxìn nà jù huà ma?
ရှန့်ဇိုက်z ရန့်r(င်)ဝေါ်ရှန်း(င်)ရှင့် နာ့ကျွိဟွာ့မား
အခု ငါ့ကို အဲဒီစကား ယုံခိုင်းနေတာလား။
Xiànzài shuō de huà bú shì kāiwánxiào de.
ရှန့်ဇိုက်z ရှောhတဲ့ဟွာ့ ပူရှစ်h ခိုင်းဝမ်ရှောက်တဲ့
အခု ပြောတဲ့စကားတွေက နောက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။
Nǐ shuō wán le ma?
Wǒ néng tì nǐ shuō ma?
ငါ မင်းကိုယ်စား ပြောပေးရမလား။
Yǐhoù zài shuō ba, wǒ yào chídào lè.
ယီဟို့ ဇိုက်zရှောhပါ့ ဝေါ်ယောက်ချီhတောက်လဲာ့
နောက်မှ ထပ်ပြောပါ၊ ငါ နောက်ကျနေပြီ။
Nǐ zìjǐ shuō de ba.
Méiyǒu shénme yào shuō de.
ဝါကတြို စုစညျးမှု - ၄၇ ။
ဒီလိုဝါကတြိုလေးတှကေ စကားပွောတဲ့နရောမှာ အရမျးအသုံးဝငျပါတယျ။ ကကျြမှတျထားဖို့ကတော့ သငျ့တာဝနျပေါ့နျော။
တာစှမျ့ ပါထားဇဲငျzမဲာ့ ခြုhလီ
နီ ကနျ့မာတနျးရှငျး ကြဲ့hရှဲ
မငျးက ဘာလို့ ဒါတှကေို စိုးရိမျနတောလဲ။
သူ အဲဒီလို ပွောလား။
ခနျ့လိုငျ ဟိုငျကဲငျးနီရှောh နာ့ကြုံh(ငျ)ဟှာ့
ကွညျ့ရတာ မငျးကို အဲဒီလို ပွောလိုကျတာပဲ။
ရှနျ့ဇိုကျz ရနျ့r(ငျ)ဝျေါရှနျး(ငျ)ရှငျ့ နာ့ကြှိဟှာ့မား
အခု ငါ့ကို အဲဒီစကား ယုံခိုငျးနတောလား။
ရှနျ့ဇိုကျz ရှောhတဲ့ဟှာ့ ပူရှဈh ခိုငျးဝမျရှောကျတဲ့
အခု ပွောတဲ့စကားတှကေ နောကျနတော မဟုတျဘူး။
ငါ မငျးကိုယျစား ပွောပေးရမလား။
ယီဟို့ ဇိုကျzရှောhပါ့ ဝျေါယောကျခြီhတောကျလဲာ့
နောကျမှ ထပျပွောပါ၊ ငါ နောကျကနြပွေီ။
给 - မြန်မာလို ဘာလဲ။
6:23 PM C-Sentence , Chinese
တရုတ်ဘာသာမှာ 给 ဆိုတာ ပေးတယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ အဲဒီစကားလုံးက အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။
Wǒ gē gěi le wǒ yí kuài biǎo.
ဝေါ်ကဲယ်း ကေလဲာ့ဝေါ် ယီခွိုက်ပြောင်
ငါ့အစ်ကိုက ငါ့ကို နာရီတစ်လုံး ပေးတယ်။
Gōngsī gěi tā yí ge yuè de jià.
ကုံး(င်)စီး ကေထား ယီကဲာ့ယွဲ့တဲ့ကျာ့
သူ့ကို ကုမ္ပဏီက ခွင့်တစ်လ ပေးလိုက်တယ်။
Zhè běn shū shì gěi nǐ de.
ဒီစာအုပ်က မင်းအတွက်ပါ။ မင်းကို ပေးမယ်။
Gěi wǒ yì bēi shuǐ hē.
ကေးဝေါ် ယိပေးရွှေh ဟဲယ်း
ငါ့ကို ရေတစ်ခွက်လောက် တိုက်ပါ။
tā gěi le wǒ yì jiǎo.
သူ ငါ့ကို တစ်ချက်ကန်လိုက်တယ်။
Gěi wǒ kàn kan.
Xìn yǐjīng jiāo gěi tā le.
ရှင့် ယီကျင်း(င်) ကျောင်းကေထားလဲာ့
Wǒ gěi nǐ dāng fānyì.
ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို စကားပြန်လုပ်ပေးမယ်။
Tā gěi wǒ dàoqiàn le.
သူ ငါ့ကို တောင်းပန်တယ်။
Gěi tā liǎ qiánr.
သူတို့နှစ်ယောက်ကို ပိုက်ဆံနည်းနည်း ပေးလိုက်ပါ။
Jīnglǐ bú zài, qǐng nǐ gěi tā liú gè tiáo ba.
ကျင်း(င်)လီ ပူဇိုက်z ချင်း(င်)နီကေထား လျိုကဲာ့ထျောင်ပါ့
မန်နေဂျာ အပြင်သွားတယ်၊ ခင်ဗျား သူ့အတွက် စာတိုလေး ချန်ထားခဲ့ပါလား။
给 - မွနျမာလို ဘာလဲ။
တရုတျဘာသာမှာ 给 ဆိုတာ ပေးတယျလို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ အဲဒီစကားလုံးက အရမျးအသုံးဝငျပါတယျ။
ဝျေါကဲယျး ကလေဲာ့ဝျေါ ယီခှိုကျပွောငျ
ငါ့အဈကိုက ငါ့ကို နာရီတဈလုံး ပေးတယျ။
ကုံး(ငျ)စီး ကထေား ယီကဲာ့ယှဲ့တဲ့ကြာ့
သူ့ကို ကုမ်ပဏီက ခှငျ့တဈလ ပေးလိုကျတယျ။
ဒီစာအုပျက မငျးအတှကျပါ။ မငျးကို ပေးမယျ။
ကေးဝျေါ ယိပေးရှေh ဟဲယျး
ငါ့ကို ရတေဈခှကျလောကျ တိုကျပါ။
သူ ငါ့ကို တဈခကျြကနျလိုကျတယျ။
ရှငျ့ ယီကငျြး(ငျ) ကြောငျးကထေားလဲာ့
ကြှနျတျော ခငျဗြားကို စကားပွနျလုပျပေးမယျ။
သူ ငါ့ကို တောငျးပနျတယျ။
သူတို့နှဈယောကျကို ပိုကျဆံနညျးနညျး ပေးလိုကျပါ။
ကငျြး(ငျ)လီ ပူဇိုကျz ခငျြး(ငျ)နီကထေား လြိုကဲာ့ထြောငျပါ့
မနျနဂြော အပွငျသှားတယျ၊ ခငျဗြား သူ့အတှကျ စာတိုလေး ခနျြထားခဲ့ပါလား။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၄၆ ။
6:05 PM C-Sentence , Chinese
သင် တရုတ်စကား လေ့လာတဲ့အခါမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေဖို့အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ ၀ါကျတိုလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပြီနော်။
Qǐng nǐ xiān qiānmíng.
လက်မှတ် အရင် ထိုးပေးပါခင်ဗျာ။
Nǐ bāng wǒ yī cì ba.
မင်း ငါ့ကို တစ်ခါလောက် ကူညီပါ။
Duì bù qǐ, wǒ bù néng nàme zuò.
တွေ့ပုချီ ဝေါ်ပုနဲင်(င်) နာ့မဲာ့ဇော့z
အားနာပါတယ်၊ ငါ အဲဒီလို လုပ်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။
Méiyǒu zài guānlián de rén ma?
နောက်ထပ် ပတ်သက်တဲ့သူ မရှိတော့ဘူးလား။
Wùhuì quán jiěkāi le.
Bú yòng bānjiā le.
Dàlěngtiān zài zhèlǐ gàn shénme?
တာ့လဲင်(င်)ထျန်း ဇိုက်zကျဲ့hလီ ကန့်ရှဲhမဲာ့
ဒီလောက် အေးနေတာကို ဒီမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ။
Wǒ zuò bú dào de shì, nǐ juéde shì shénme?
ဝေါ်ဇော့zပူတောက်တဲ့ရှစ်h နီကျွယ်တဲ့ ရှစ်hရှဲhမဲာ့
ကျွန်တော် မလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စက ဘာကိစ္စလို့ ခင်ဗျား ထင်ပါသလဲ။
ဝါကတြို စုစညျးမှု - ၄၆ ။
သငျ တရုတျစကား လလေ့ာတဲ့အခါမှာ အထောကျအကူ ဖွဈစဖေို့အတှကျ အသုံးဝငျတဲ့ ဝါကတြိုလေးတှကေို တငျပေးလိုကျပွီနျော။
လကျမှတျ အရငျ ထိုးပေးပါခငျဗြာ။
မငျး ငါ့ကို တဈခါလောကျ ကူညီပါ။
တှပေု့ခြီ ဝျေါပုနဲငျ(ငျ) နာ့မဲာ့ဇော့z
အားနာပါတယျ၊ ငါ အဲဒီလို လုပျနိုငျမယျ မထငျဘူး။
နောကျထပျ ပတျသကျတဲ့သူ မရှိတော့ဘူးလား။
တာ့လဲငျ(ငျ)ထနျြး ဇိုကျzကြဲ့hလီ ကနျ့ရှဲhမဲာ့
ဒီလောကျ အေးနတောကို ဒီမှာ ဘာလုပျနတောလဲ။
ဝျေါဇော့zပူတောကျတဲ့ရှဈh နီကြှယျတဲ့ ရှဈhရှဲhမဲာ့
ကြှနျတျော မလုပျနိုငျတဲ့ကိစ်စက ဘာကိစ်စလို့ ခငျဗြား ထငျပါသလဲ။
အရင် - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောမလဲ။
5:57 PM C-Sentence , Chinese
တရုတ်ဘာသာစကားမှာ 先 ဆိုတာ အရင်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ 先 ကို အသုံးပြုပြီး ၀ါကျလေးတွေ ပြောကြည့်ရအောင်။
Nǐ xiān bié zǒu, wǒ yǒu huà gēn nǐ shuō.
နီ ရှန်းပြဲဇိုz ဝေါယိုဟွာ့ ကဲင်းနီရှောh
မင်း အရင် မသွားနဲ့ဦး၊ ငါ ပြောစရာ ရှိတယ်။
Nǐ xiān cāi.
နီ ရှန်း ဆိုင်း
မင်း အရင် ခန့်မှန်းပါ။
Nǐ xiān kàn yīxià.
မင်း အရင် ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Nǐ xiān zěnme bù gàosù wǒ ne?
နီ ရှန်းဇဲင်zမဲာ့ ပူကောက်စုဝေါ်နဲ
ခင်ဗျား ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော့်ကို အရင် မပြောပြတာလဲ။
Nǐ xiān chī, wǒ děng yíxià chī.
နီ ရှန်းချီးh ဝေါတဲင်(င်)ယီရှာ့ချီးh
မင်း အရင်စား၊ ငါ ခဏနေမှ စားမယ်။
Dà jiā bié chūshēng, xiān zǐxì tīng.
တာ့ကျား ပြယ်ချူးhရှဲင်းh(င်) ရှန်း ဇီzရှိထင်း(င်)
အားလုံး အသံမထွက်ကြပါနဲ့ဦး၊ အရင် သေသေချာချာ နားထောင်ကြပါ။
Nǐ xiān shuō qīngchu.
နီ ရှန်းရှောh ချင်း(င်)ချုh
မင်း အရင် ရှင်းအောင် ပြောပါ။
Nǐ xiān bié wèn, dào shíhou zìrán míngbái.
နီ ရှန်းပြယ်ဝဲင့် တောက်ရှီဟို့ ဇစ်zရန်းr မျင်း(င်)ပိုင်
နင် အရင် မမေးနဲ့လေ၊ အချိန်တန်ရင် သူ့အလိုလို နားလည်လာလိမ့်မယ်။
Nǐ xiān qù mǎi làzhú.
နီ ရှန်းချွိမိုင် လာ့ကျူh
နင် ဖယောင်းတိုင် အရင် သွားဝယ်လိုက်ပါ။
အရငျ - တရုတျလို ဘယျလိုပွောမလဲ။
တရုတျဘာသာစကားမှာ 先 ဆိုတာ အရငျလို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ 先 ကို အသုံးပွုပွီး ဝါကလြေးတှေ ပွောကွညျ့ရအောငျ။
နီ ရှနျးပွဲဇိုz ဝေါယိုဟှာ့ ကဲငျးနီရှောh
မငျး အရငျ မသှားနဲ့ဦး၊ ငါ ပွောစရာ ရှိတယျ။
နီ ရှနျး ဆိုငျး
မငျး အရငျ ခနျ့မှနျးပါ။
မငျး အရငျ ကွညျ့လိုကျပါဦး။
နီ ရှနျးဇဲငျzမဲာ့ ပူကောကျစုဝျေါနဲ
ခငျဗြား ဘာဖွဈလို့ ကြှနျတေျာ့ကို အရငျ မပွောပွတာလဲ။
နီ ရှနျးခြီးh ဝေါတဲငျ(ငျ)ယီရှာ့ခြီးh
မငျး အရငျစား၊ ငါ ခဏနမှေ စားမယျ။
တာ့ကြား ပွယျခြူးhရှဲငျးh(ငျ) ရှနျး ဇီzရှိထငျး(ငျ)
အားလုံး အသံမထှကျကွပါနဲ့ဦး၊ အရငျ သသေခြောခြာ နားထောငျကွပါ။
နီ ရှနျးရှောh ခငျြး(ငျ)ခြုh
မငျး အရငျ ရှငျးအောငျ ပွောပါ။
နီ ရှနျးပွယျဝဲငျ့ တောကျရှီဟို့ ဇဈzရနျးr မငျြး(ငျ)ပိုငျ
နငျ အရငျ မမေးနဲ့လေ၊ အခြိနျတနျရငျ သူ့အလိုလို နားလညျလာလိမျ့မယျ။
နီ ရှနျးခြှိမိုငျ လာ့ကြူh
နငျ ဖယောငျးတိုငျ အရငျ သှားဝယျလိုကျပါ။
အရင် ၊ ပြီးနောက် - တရုတ်လို ပြောကြည့်မယ်။
2:00 AM C-Sentence , Chinese
ဒီစကားစုလေးတွေကလည်း အရမ်း အသုံးတည့်ပါတယ်။ လက်တွေ့အသုံးဝင်တဲ့အတွက် လေ့လာမှတ်သားထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Sheí xiān dòng de shǒu?
ဘယ်သူ အရင် လက်ပါတာလဲ။
Nǐ xiān tóu méi shuō guo zhè shì.
နီ ရှန်းထို မေရှောhကော့ ကျဲ့hရှစ်h
မင်း အရင်တုန်းက ဒီကိစ္စမ ပြောဖူးပါဘူး။
Wǒ xiān wèn, nǐ xiān huí dá.
ငါ အရင် မေးတာ၊ မင်း အရင် ဖြေ။
Xiān bǎ mén kāi kai.
တံခါး အရင် ဖွင့်လိုက်ပါဦး။
Qǐ xiān tā fǎnduì, hòulái cái tóngyì.
ချီရှန်း ထားဖန်fတွေ့ ဟို့လိုင် ဆိုင်းထုံ(င်)ယိ
ပထမတော့ သူ ကန့်ကွက်တယ်၊ နောက်မှ သဘောတူတာ။
Xiān dào xiān dé.
ဦးသူ ယူပေါ့။ အရင်ရောက်တဲ့သူ အရင်ယူပေါ့။
Zhè shì jiàn mánghuó, yào xiān zuò.
ကျဲ့hရှစ်h ကျန့်မန်း(င်)ဟော် ယောက်ရှန်းဇော့z
ဒီအလုပ် အရေးကြီးတယ်၊ အရင် လုပ်ပါ။
Xiān gàn zhè ge, zài gàn nà ge.
ရှန်းကန့် ကျဲ့hကဲာ့ ဇိုက်zကန့် နာ့ကဲာ့
ဒါကို အရင် လုပ်ပါ၊ ပြီးတော့မှ ဟိုဟာကို လုပ်ပါ။
အရငျ၊ ပွီးနောကျ - တရုတျလို ပွောကွညျ့မယျ။
ဒီစကားစုလေးတှကေလညျး အရမျး အသုံးတညျ့ပါတယျ။ လကျတှအေ့သုံးဝငျတဲ့အတှကျ လလေ့ာမှတျသားထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ဘယျသူ အရငျ လကျပါတာလဲ။
နီ ရှနျးထို မရှေောhကော့ ကြဲ့hရှဈh
မငျး အရငျတုနျးက ဒီကိစ်စမ ပွောဖူးပါဘူး။
ငါ အရငျ မေးတာ၊ မငျး အရငျ ဖွေ။
တံခါး အရငျ ဖှငျ့လိုကျပါဦး။
ခြီရှနျး ထားဖနျfတှေ့ ဟို့လိုငျ ဆိုငျးထုံ(ငျ)ယိ
ပထမတော့ သူ ကနျ့ကှကျတယျ၊ နောကျမှ သဘောတူတာ။
ဦးသူ ယူပေါ့။ အရငျရောကျတဲ့သူ အရငျယူပေါ့။
ကြဲ့hရှဈh ကနျြ့မနျး(ငျ)ဟျော ယောကျရှနျးဇော့z
ဒီအလုပျ အရေးကွီးတယျ၊ အရငျ လုပျပါ။
ရှနျးကနျ့ ကြဲ့hကဲာ့ ဇိုကျzကနျ့ နာ့ကဲာ့
ဒါကို အရငျ လုပျပါ၊ ပွီးတော့မှ ဟိုဟာကို လုပျပါ။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၄၅ ။
1:53 AM C-Sentence , Chinese
ဒီနေ့အတွက် လေ့လာကျက်မှတ်စရာအဖြစ် ကောင်းနိုးရာရာစကားစုလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပြီနော်။ ကျက်သာထားကြပေတော့။
Yǒu shénme shāngxīn de shì ma?
ယိုရှဲhမဲာ့ ရှန်းh(င်)ရှင်းတဲ့ ရှစ်hမား
Yīnwèi wǒ shēngqì le ma?
Shì shénme guānxi?
Bú yào xiàdào, wǒ bú shì lái jiàn nǐ de.
ပူယောက် ရှာ့တောက် ဝေါ်ပူရှစ်h လိုင်ကျန့်နီတဲ့
မလန့်ပါနဲ့၊ ငါက နင်နဲ့တွေ့ဖို့လာတာ မဟုတ်ဘူး။
Zěnme rènshì de?
Yǐqián shàngbān de shíhou rènshì de rén.
ယီချန် ရှန့်h(င်)ပန်းတဲ့ရှီhဟို့ ရဲင့်rရှစ်hတဲ့ရဲင်r
အရင် အလုပ်လုပ်တုန်းက သိတဲ့သူပါ။
Nǐ bù xūyào rènshì de rén.
Xūyào de huà wǒ huì shuō de.
Suǒyǐ gàosù wǒ ba.
အဲဒါကြောင့် ငါ့ကို ပြောပြပါ။
Tā hǎoxiàng yǒu huà duì nǐ shuō.
ထားဟောင်ရှန့်(င်) ယိုဟွာ့ တွေ့နီရှောh
သူ့မှာ မင်းကို ပြောစရာရှိတယ်နဲ့ တူတယ်။
lǐyóu shì shénme?
Wǒ xiǎng wèn yí jiàn shì.
Wèishénme xiǎng zhīdào?
Xiǎng zhīdào de shì shénme?
သိချင်တာက ဘာလဲ။ ဘာကို သိချင်တာလဲ။
ဝါကတြို စုစညျးမှု - ၄၅ ။
ဒီနအေ့တှကျ လလေ့ာကကျြမှတျစရာအဖွဈ ကောငျးနိုးရာရာစကားစုလေးတှကေို တငျပေးလိုကျပွီနျော။ ကကျြသာထားကွပတေော့။
ယိုရှဲhမဲာ့ ရှနျးh(ငျ)ရှငျးတဲ့ ရှဈhမား
ပူယောကျ ရှာ့တောကျ ဝျေါပူရှဈh လိုငျကနျြ့နီတဲ့
မလနျ့ပါနဲ့၊ ငါက နငျနဲ့တှဖေို့လာတာ မဟုတျဘူး။
ယီခနျြ ရှနျ့h(ငျ)ပနျးတဲ့ရှီhဟို့ ရဲငျ့rရှဈhတဲ့ရဲငျr
အရငျ အလုပျလုပျတုနျးက သိတဲ့သူပါ။
အဲဒါကွောငျ့ ငါ့ကို ပွောပွပါ။
ထားဟောငျရှနျ့(ငျ) ယိုဟှာ့ တှနေီ့ရှောh
သူ့မှာ မငျးကို ပွောစရာရှိတယျနဲ့ တူတယျ။
သိခငျြတာက ဘာလဲ။ ဘာကို သိခငျြတာလဲ။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၄၄ ။
1:21 AM C-Sentence , Chinese
သင့်အတွက် လေ့လာစရာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဒီနေ့အတွက် လေ့လာစရာ စကားစုလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပြီနော်။
Nǐ bú yào tài làngfèi qián.
နီ ပူယောက် ထိုက်လန့်ဖေ့fချန်
မင်း ပိုက်ဆံ သိပ်မဖြုန်းပါနဲ့။
Dào yuèdǐ le yào shěng qián.
လကုန်ရက် ရောက်ပြီ၊ ပိုက်ဆံ ချွေတာရမယ်။
Bú yào làngfèi shíjiān.
ပူယောက် လန့်ဖေ့f ရှီhကျန်း
Shěng yòng yīdiǎn.
Tā zuò shēngyi, shībài le.
သူ အရောင်းအဝယ်လုပ်တာ ဆုံးရှုံးသွားပြီ။
Bù ānquán de gōng, bú yào zuò.
ဘေးမကင်းတဲ့ အလုပ်ကို မလုပ်ပါနဲ့။
Bú yào zuò bù héfǎ de gōng.
ဥပဒေပြင်ပက အလုပ်ကို မလုပ်ပါနဲ့။
Bú yào suíbiàn luànzuò.
Zhè gōngzuò bù hésuàn.
Zuìjìn shēngyi bù hǎo.
ဇွေ့zကျင့် ရှဲင်းh(င်)ယိ ပုဟောင်
အခုတလော အရောင်းအဝယ် မကောင်းဘူး။
ဝါကတြို စုစညျးမှု - ၄၄ ။
သငျ့အတှကျ လလေ့ာစရာတှကေတော့ အမြားကွီးပါပဲ။ ဒီနအေ့တှကျ လလေ့ာစရာ စကားစုလေးတှကေို တငျပေးလိုကျပွီနျော။
နီ ပူယောကျ ထိုကျလနျ့ဖေ့fခနျြ
မငျး ပိုကျဆံ သိပျမဖွုနျးပါနဲ့။
လကုနျရကျ ရောကျပွီ၊ ပိုကျဆံ ခြှတောရမယျ။
ပူယောကျ လနျ့ဖေ့f ရှီhကနျြး
သူ အရောငျးအဝယျလုပျတာ ဆုံးရှုံးသှားပွီ။
ဘေးမကငျးတဲ့ အလုပျကို မလုပျပါနဲ့။
ဥပဒပွေငျပက အလုပျကို မလုပျပါနဲ့။
ဇှေ့zကငျြ့ ရှဲငျးh(ငျ)ယိ ပုဟောငျ
အခုတလော အရောငျးအဝယျ မကောငျးဘူး။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၄၃ ။
1:13 AM C-Sentence , Chinese
ဘာသာစကားတစ်မျိုးမျိုးကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်ချင်ရင် အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားလေ့ကျင့်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့ များများလေ့ကျင့်ပါ။
Dǎ diànhuà yě bù jiē, fā duǎnxìn yě bù huí.
တာတျန့်ဟွာ့ယယ် ပုကျဲ ဖားfတွမ်ရှင့်ယယ် ပုဟွေ
ဖုန်းလည်း မကိုင်ဘူး၊ မက်ဆေ့ခ်ျလည်း ပြန်မပို့ဘူး။
Wǒ ràng tā jìn lái.
ငါ သူ့ကို ဝင်လာခိုင်းလိုက်မယ်။
Gànma hē nàme duō shuǐ?
ဘာလို့ ရေတွေ ဒီလောက်တောင် သောက်နေတာလဲ။
Nà tiān, chuān shénme yīfu ne?
Gāi zuòde dōu zuò ba.
Wǒ gēn nǐ gàobái yī jiàn shì ba.
ဝေါ်ကဲင်းနီ ကောက်ပိုင် ယီကျန့်ရှစ်hပါ့
ငါ မင်းကို ဝန်ခံစရာတစ်ခု ရှိတယ်။
Wǒ yǒu jiàn shì xiǎng wèn nǐ.
ငါ မင်းကို မေးစရာ ရှိတယ်။
Wǒ huì chéngshí de huídá.
ဝေါ်ဟွေ့ ချဲင်းh(င်)ရှီhတဲ့ ဟွေးတာ
ငါ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြေပါ့မယ်။
Xiànzài hái méi quèdìng ma?
Wǒ sòng nǐ huí qù ba.
ငါ မင်းကို ပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်။
ဝါကတြို စုစညျးမှု - ၄၃ ။
ဘာသာစကားတဈမြိုးမြိုးကို ကြှမျးကငျြစှာ တတျမွောကျခငျြရငျ အားသှနျခှနျစိုကျကွိုးစားလကေ့ငျြ့ဖို့ လိုအပျပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ မြားမြားလကေ့ငျြ့ပါ။
တာတနျြ့ဟှာ့ယယျ ပုကြဲ ဖားfတှမျရှငျ့ယယျ ပုဟှေ
ဖုနျးလညျး မကိုငျဘူး၊ မကျဆခြေျ့လညျး ပွနျမပို့ဘူး။
ငါ သူ့ကို ဝငျလာခိုငျးလိုကျမယျ။
ဘာလို့ရတှေေ ဒီလောကျတောငျ သောကျနတောလဲ။
ဝျေါကဲငျးနီ ကောကျပိုငျ ယီကနျြ့ရှဈhပါ့
ငါ မငျးကို ဝနျခံစရာတဈခု ရှိတယျ။
ငါ မငျးကို မေးစရာ ရှိတယျ။
ဝျေါဟှေ့ ခြဲငျးh(ငျ)ရှီhတဲ့ ဟှေးတာ
ငါ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဖွပေါ့မယျ။
ငါ မငျးကို ပွနျလိုကျပို့ပေးမယျ။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၄၂ ။
1:01 AM C-Sentence , Chinese
ဒီလိုစကားစုလေးတွေကိုလည်း များများ ကျက်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ လိုတဲ့အခါမှာ အလွယ်တကူ ထုတ်သုံးလို့ရတာပေါ့။
Nǐ kěyǐ zǒu, méiyǒu rén huì lán nǐ.
နီခဲယ်းယီဇိုz မေးယိုရဲင်r ဟွေ့လန်းနီ
မင်း သွားလို့ရတယ်၊ မင်းကို ဘယ်သူမှ မတားဘူး။
Nà jiù méi shénme kě pà de.
နာ့ကျို့ မေးရှဲhမဲာ့ ခဲယ်ဖာ့တဲ့
ဒါဆို ဘာမှကြောက်စရာ မရှိတော့ဘူး။
Zěnme bú wèn ne?
Nǐ háishì duō guānxīn zìjǐ ba.
နီ ဟိုင်ရှစ်h တောကွမ်းရှင်း ဇစ်zကျီပါ့
မင်းကိုယ်မင်းပဲ များများ ဂရုစိုက်ပါ။
Yīnggāi méi cuò.
Nà wǒ jiù chánghuà duǎnshuō ba.
နာ့ ဝေါ်ကျို့ ချန်h(င်)ဟွာ့တွမ်ရှောhပါ့
ဒါဆို ငါ လိုရင်းတိုရှင်းပဲ ပြောမယ်။
Méi shénme shìr de huà, nǐ kěyǐ zǒu le.
တခြားကိစ္စ မရှိဘူးဆိုရင် နင် သွားလို့ရပြီ။
Wèishénme lái zhǎo wǒ.
ဘာလို့ ငါ့ကို လာရှာတာလဲ။
Xìn lǐmiàn dōu xiě le.
စာထဲမှာ အားလုံး ရေးထားတယ်။
Wǒ zài wèn nǐ ne?
ငါ မင်းကို မေးနေတာလေ။
Xíng bù xíng?
ဖြစ်လား မဖြစ်ဘူးလား။ ရမလား မရဘူးလား။
ဝါကတြို စုစညျးမှု - ၄၂ ။
ဒီလိုစကားစုလေးတှကေိုလညျး မြားမြား ကကျြမှတျထားသငျ့ပါတယျ။ လိုတဲ့အခါမှာ အလှယျတကူ ထုတျသုံးလို့ရတာပေါ့။
နီခဲယျးယီဇိုz မေးယိုရဲငျr ဟှလေ့နျးနီ
မငျး သှားလို့ရတယျ၊ မငျးကို ဘယျသူမှ မတားဘူး။
နာ့ကြို့ မေးရှဲhမဲာ့ ခဲယျဖာ့တဲ့
ဒါဆို ဘာမှကွောကျစရာ မရှိတော့ဘူး။
နီ ဟိုငျရှဈh တောကှမျးရှငျး ဇဈzကြီပါ့
မငျးကိုယျမငျးပဲ မြားမြား ဂရုစိုကျပါ။
နာ့ ဝျေါကြို့ ခနျြh(ငျ)ဟှာ့တှမျရှောhပါ့
ဒါဆို ငါ လိုရငျးတိုရှငျးပဲ ပွောမယျ။
တခွားကိစ်စ မရှိဘူးဆိုရငျ နငျ သှားလို့ရပွီ။
ဘာလို့ ငါ့ကို လာရှာတာလဲ။
စာထဲမှာ အားလုံး ရေးထားတယျ။
ငါ မငျးကို မေးနတောလေ။
ဖွဈလား မဖွဈဘူးလား။ ရမလား မရဘူးလား။
နာရီ၊ မိနစ်၊ စက္ကန့်များဖြင့် စကားပြောခြင်း။
12:46 AM J-Sentence , Japanese
အချိန်အကြောင်းလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် နာရီ၊ မိနစ်၊ စက္ကန့်တွေကိုလည်း ချန်လှပ်ထားလို့မရပါ။ ဒါကြောင့်မို့ နာရီ၊ မိနစ်၊ စက္ကန့်တွေကို ပြောဆိုတတ်အောင် လေ့လာကြပါစို့။
>Ima nanji desuka?
>Ichi ji desu.
>Ichi ji han desu.
>Choodo ni ji desu.
>San ji go fun sugi desu.
>Yo ji jippun mae desu.
>Nanji goro ikimashooka?
>Hikooki wa gozen juu ji nijippun ni demasu.
>လေယာဉ်က မနက် ဆယ်နာရီ ၂၀-မိနစ်မှာ ထွက်မယ်။
>Gogo ichi ji jippun ni tsukimasu.
>နေ့လည်တစ်နာရီ ဆယ်မိနစ်မှာ ရောက်ပါမယ်။
>>Aruite go fun gurai kakarimasu.
一時 ichi ji တစ်နာရီ
二時 ni ji နှစ်နာရီ
三時 san ji သုံးနာရီ
四時 yo ji လေးနာရီ
五時 go ji ငါးနာရီ
六時 roku ji ခြောက်နာရီ
七時 shichi ji ခုနစ်နာရီ
八時 hachi ji ရှစ်နာရီ
九時 ku ji ကိုးနာရီ
十時 juu ji ဆယ်နာရီ
一分 ippun တစ်မိနစ်
二分 ni fun နှစ်မိနစ်
三分 san pun သုံးမိနစ်
四分 yon pun လေးမိနစ်
五分 go fun ငါးမိနစ်
六分 roppun ခြောက်မိနစ်
七分 nana fun ခုနစ်မိနစ်
八分 happun, hachi fun ရှစ်မိနစ်
九分 kyuu fun ကိုးမိနစ်
十分 jippun ဆယ်မိနစ်
十五分 juu go fun ၁၅-မိနစ်
二十分 ni jippun ၂၀-မိနစ်
三十分 san jippun ၃၀-မိနစ်
四十分 yon jippun ၄၀-မိနစ်
五十分 go jippun ၅၀-မိနစ်
六十分 roku jippun ၆၀-မိနစ်
何分 nan pun ဘယ်နှစ်မိနစ်လဲ
何時 nan ji ဘယ်နှစ်နာရီလဲ
今 ima ယခု၊ အခု
丁度 choodo တိတိ
半 han တဝက်
過ぎ sugi ကျော်လွန်ခြင်း
前 mae ရှေ့
ごろ goro -လောက်၊ ခန့်၊ နီးပါး
午前 gozen မနက်ပိုင်း
午後 gogo ညနေပိုင်း
昼休み hiru yasumi နေ့လည်အားလပ်ချိန်
一秒 ichi byoo တစ်စက္ကန့်
二秒 ni byoo နှစ်စက္ကန့်
三秒 san byoo သုံးစက္ကန့်
四秒 yon byoo လေးစက္ကန့်
五秒 go byoo ငါးစက္ကန့်
六秒 roku byoo ခြောက်စက္ကန့်
七秒 nana byoo ခုနစ်စက္ကန့်
八秒 hachi byoo ရှစ်စက္ကန့်
12:37 AM J-Sentence , Japanese
ခုနှစ်သက္ကရာဇ်တွေကို ပြောတတ်စေဖို့ ဒီသင်ခန်းစာက သင့်ကို အထောက်အကူပြုပေးပါလိမ့်မယ်။ အခုပဲ လေ့လာကြပါစို့။
>Kotoshi wa seireki nan nen desuka?
>ဒီနှစ်က ခရစ်နှစ် ဘယ်နှစ်ခုနှစ် ဖြစ်ပါသလဲ။
>Kotoshi wa seireki nisen juuyon nen desu.
>ဒီနှစ်က ခရစ်နှစ် ၂၀၁၄-ခုနှစ် ဖြစ်ပါတယ်။
>Anata wa nan nen, nan gatsu, nan nichi ni umaremashitaka?
>ခင်ဗျားက ဘယ်နှစ်ခုနှစ်၊ ဘာလ၊ ဘယ်နှစ်ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါသလဲ။
>Watashi wa sen kyuuhyaku nanajuu hachi nen roku gatsu itsuka ni umaremashita.
>ကျွန်တော်က ၁၉၇၈-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၅-ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
>Anata wa Nihon ni nan nen imasuka?
>ခင်ဗျားက ဂျပန်မှာ ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာ ရှိမှာလဲ(နေထိုင်မှာလဲ)။
>Watashi wa Nihon ni ichinen to rokka getsu gurai imasu.
>ကျွန်တော်က ဂျပန်မှာ တစ်နှစ်နဲ့ ခြောက်လကြာနီးပါး ရှိပါ့မယ်။
>Anata wa kono mae no nichiyoobi ni dare to eigaeikimashitaka?
>ခင်ဗျားက လွန်ခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ဘယ်သူနဲ့ ရုပ်ရှင်ကို သွားခဲ့ပါသလဲ။
>Kondo no nichiyoobi ni mo eiga o mimasuka?
>Watashi wa nichiyoobi ni tokidoki eiga o mimasu.
>ကျွန်တော်က တနင်္ဂနွေနေ့မှာ တခါတလေ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါတယ်။
一昨年 ototoshi တစ်နှစ်က
去年 kyonen မနှစ်က
今年 kotoshi ဒီနှစ်
来年 rainen နောင်နှစ်၊ လာမည့်နှစ်
再来年 sarainen တစ်နှစ်ကျော်နှစ်
半年 hantoshi နှစ်ဝက်
一か月 ikkagetsu တစ်လကြာ
二か月 nikagetsu နှစ်လကြာ
三か月 sankagetsu သုံးလကြာ
四か月 yonkagetsu လေးလကြာ
五か月 gokagetsu ငါးလကြာ
六か月 rokkagetsu ခြောက်လကြာ
七か月 nanakagetsu ခုနစ်လကြာ
八か月 hakkagetsu ရှစ်လကြာ
九か月 kyuukagetsu ကိုးလကြာ
十か月 jikkagetsu ဆယ်လကြာ
何か月 nan kagetsu ဘယ်နှစ်လကြာလဲ
何年 nan nen ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကြာလဲ၊ ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာလဲ
西暦 seireki ခရစ်နှစ်
生まれる umareru မွေးဖွားသည်
時々 tokidoki တခါတလေ
位 gurai နီးပါး၊ ခန့်၊ လောက်
ရက်တွေ၊ လတွေကို ပြောကြတော့မယ်ဆိုရင်။
12:28 AM J-Sentence , Japanese
ဂျပန်ဘာသာစကား လေ့လာကြသူများအနေဖြင့် ရက်တွေ၊ လတွေကို ပြောတော့မယ်ဆိုရင် ဒီသင်ခန်းစာလေးကို လေ့လာထားကြပေါ့နော်။
>Kongetsu wa nan gatsu desuka?
>Kongetsu wa shigatsu desu.
>ဒီလက ဧပြီလ ဖြစ်ပါတယ်။
>Sengetsu wa sangatsu deshita.
>လွန်ခဲ့တဲ့လက မတ်လ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
>Raigetsu wa gogatsu desu.
>Sengetsu wa nangatsu deshitaka.
>Kyoo wa nangatsu, nannnichi, nanyoobi desuka?
>ဒီနေ့က ဘာလ၊ ဘယ်နှစ်ရက်နေ့၊ ဘာနေ့ ဖြစ်ပါသလဲ။
>Anata no tanjoobi wa nangatsu nannichi desuka?
>ခင်ဗျားရဲ့ မွေးနေ့က ဘာလ၊ ဘယ်နှစ်ရက်နေ့ ဖြစ်ပါသလဲ။
>Anata wa itsu Myanmaa kara Nihonekimashitaka?
>ခင်ဗျားက ဘယ်တုန်းက မြန်မာပြည်ကနေ ဂျပန်ကို လာခဲ့ပါသလဲ။
>Watashi wa nigatsu hatsuka ni Myanmaa kara Nihonekimashita.
>ကျွန်တော်က ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀-ရက်နေ့မှာ မြန်မာပြည်ကနေ ဂျပန်ကို လာခဲ့ပါတယ်။
一月 ichi gatsu ဇန်နဝါရီလ
二月 ni gatsu ဖေဖော်ဝါရီလ
三月 san gatsu မတ်လ
四月 shi gatsu ဧပြီလ
五月 go gatsu မေလ
六月 roku gatsu ဇွန်လ
七月 shichi gatsu ဇူလိုင်လ
八月 hachi gatsu သြဂုတ်လ
九月 ku gatsu စက်တင်ဘာလ
十月 juu gatsu အောက်တိုဘာလ
十一月 juu ichi gatsu နိုဝင်ဘာလ
十二月 juu ni gatsu ဒီဇင်ဘာလ
何月 nan gatsu ဘာလလဲ
先々月 sensen getsu အရင့်အရင်လ
先月 sen getsu လွန်ခဲ့သောလ
今月 kon getsu ဒီလ
来月 rai getsu လာမယ့်လ
再来月 sarai getsu လာမယ့်တစ်လကျော်လ
何時 itsu ဘယ်တုန်းကလဲ၊ ဘယ်တော့လဲ
誕生日 tanjoobi မွေးနေ့
中国 Chuugoku တရုတ်ပြည်
来る kuru လာသည်
နေ့ရက်တွေကို ဘယ်လိုမေးပြီး ဘယ်လိုဖြေမလဲ။
8:23 PM J-Sentence , Japanese
ဂျပန်လို “ဒီနေ့ဘာနေ့လဲ”လို့ မေးရင် “တနင်္လာနေ့ကနေ တနင်္ဂနွေနေ့အထိ” နေ့ရက်တွေကို ပြောဆိုတတ်စေဖို့ ဒီသင်ခန်းစာကို လေ့လာကြပါစို့။
>Kyoo wa nanyoobi desuka?
>Kyoo wa doyoobi desu.
>Ashita wa nichiyoobi desu.
>မနက်ဖြန်က တနင်္ဂနွေနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
>Kinoo wa kinyoobi deshita.
>မနေ့က သောကြာနေ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
>Ototoi wa nanyoobi deshitaka?
>တနေ့က ဘာနေ့ ဖြစ်ခဲ့ပါသလဲ။
>Anatagata wa suiyoobi ni dokoeikimasuka?
>ခင်ဗျားတို့က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ဘယ်ကိုသွားမလဲ။
>Ryoojikaneikimasu.
>Kayoobi ni mo doko kaeikimasuka?
>အင်္ဂါနေ့မှာလည်း တစ်နေရာရာကို သွားမလား။
>Kayoobi ni wa dokoemo ikimasen.
>အင်္ဂါနေ့မှာတော့ ဘယ်နေရာကိုမှလည်း မသွားပါ။
日曜日 nichiyoobi တနင်္ဂနွေနေ့
月曜日 getsuyoobi တနင်္လာနေ့
火曜日 kayoobi အင်္ဂါနေ့
水曜日 suiyoobi ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
木曜日 mokuyoobi ကြာသပတေးနေ့
金曜日 kinyoobi သောကြာနေ့
土曜日 doyoobi စနေနေ့
何曜日 nanyoobi ဘာနေ့လဲ
一昨日 ototoi တနေ့က
昨日 kinoo မနေ့က
今日 kyoo ဒီနေ့
明日 ashita မနက်ဖြန်
明後日 asatte သန်ဘက်ခါ
何処 doko ဘယ်လဲ
行く iku သွားသည်
毎日 mai nichi နေ့စဉ်နေ့တိုင်း
毎朝 mai asa မနက်တိုင်း
毎晩 mai ban ညတိုင်း
休み yasumi ပိတ်ရက်၊ အားလပ်ရက်
祝日 shukujitsu ရုံးပိတ်ရက်၊ ပွဲတော်ရက်
平日 heihitsu ရုံးဖွင့်ရက် (Mon to Fri)
市外 shigai ဆင်ခြေဖုံး
9:33 PM J-Kana , Japanese
ဒီနေ့လေ့ကျင့်ရမယ့်စာလုံးက များတယ်နော်။ ha-hi-fu-he-ho ငါးလုံးကို အရင်ရေးကြမယ်။ သူတို့ရဲ့ ညာဘက်မှာ daku-on တင်လိုက်ရင် ba-bi-bu-be-bo ဖြစ်သွားမယ်။ handaku-on တင်လိုက်ရင်တော့ pa-pi-pu-pe-po ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။
ア　イ　ウ　エ　オ　ン　ー
1. ハンカチ လက်သုတ်ပုဝါ၊ လက်ကိုင်ပုဝါ
2. ナイフ ဓား
3. バス ဘတ်စ်ကား
4. ズボン ဘောင်းဘီ
5. ピアノ စန္ဒရား
6. ページ စာမျက်နှာ
9:05 PM J-Kana , Japanese
na-ni-nu-ne-no ငါးလုံးရဲ့ ရေးသားပုံလေးတွေကိုလည်း လေ့လာကြည့်ကြပါအုံး။ ဒီနေ့တော့ ငါးလုံးပဲ ရေးမယ်နော်။
1. バナナ ငှက်ပျောသီး
2. テニス တင်းနစ်
3. カヌー ကနူးလှေ
4. ネクタイ နက်ခ်တိုင်၊ လည်စည်း
5. ノート မှတ်စုစာအုပ်
8:35 PM J-Kana , Japanese
ဆက်လေ့လာရန် စာလုံးများကတော့ ta-chi-tsu-te-to တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ ၄င်းတို့၏ ညာဘက်ဒေါင့်စွန်းတွင် daku-on တင်ခြင်းဖြင့် da-ji-zu-de-do အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။
1. タクシー တက္ကစီ
2. ギター ဂီတာ
3. ドイツ ဂျာမဏီနိုင်ငံ
4. テスト စမ်းသပ်မှု
5. チーズ ချီးစ်၊ ဒိန်ခဲ
6. ダンス အက
အလွတ်ကျက်ဖြေ ပညာရေးစနစ် ပြောင်းလဲသင့်ပြီ။
နားလည်မှုလေး လွဲသွားတာပါ၊ ဆောရီးနော်။
替 - ကိုယ်စားလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၄၁ ။
太 ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ။
ဟိုနားမှာ ဘာရှိလဲ၊ ဒီနားမှာ ဘာရှိလဲ။
မိမိရဲ့ မိသားစုအကြောင်းကို မိတ်ဆက်တဲ့အခါ။
ဂျပန်စာလုံး (katakana)ရေးသားနည်း- sa,shi,su,se,so,...
တရားဂုဏ်တော် ၆ ပါး။
တကယ်လို့ - တရုတ်လို ပြောကြည့်မယ်။
那 ၏ အသုံးပြုပုံများ။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၄၀ ။
ဂျပန်စာလုံး (katakana) ရေးသားနည်း - ka,ki,ku,ke,ko...
ပစ္စည်းတစ်ခုခုက တနေရာရာမှာ ရှိလား၊ မရှိလား မေးချင်ရင်။
ဟိုနေရာ၊ ဒီနေရာ...စသည်ဖြင့် ဂျပန်လို ပြောချင်ရင်။
ဂျပန်စာလုံး(katakana) ရေးသားနည်း- a,i,u,e,o,-n
၀ိဘတ်စာလုံး “e, o” ကို ဖတ်ကြပါစို့။
၀ိဘတ်စကားလုံး “wa” ကို ဖတ်ကြစို့။
“yoo-on” များကို ဖတ်ကြပါစို့။
သရသံရှည်များ (choo-on) ကို ဖတ်ကြမယ်။
ဗျည်းနှစ်ထပ်အသံ (soku-on) ကို ဖတ်ကြမယ်။
“-n” အသံ (hatsu-on) ကို ဖတ်ကြမယ်။
Teacher Training Course အရွေးခံရသူများစာရင်း။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၃၉ ။
“ဒီလူ၊ ဟိုလူ၊ ဟိုးကလူ”ကို ဂျပန်လို ပြောမယ်။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၃၈ ။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၃၇ ။
ဂျပန် Valentine’s Day( ဂျပန်ရဲ့ချစ်သူများနေ့)။
ရထားတွေနောက်ကျတဲ့အခါ အလုပ်မှာအပြစ်ပြောမခံရအောင် ဘယ...
ဂျပန် Point System အကြောင်း။
ဂျပန်ကို Traning Visa ဖြင့် လာမည့်သူများသို့။
ဒါတွေသိမယ် ဒါတွေရှိမယ်ဆိုရင် ဂျပန်မှာဆေးရုံတက်ရတာ ...
ဂျပန်ပြည်မှ သင်ယူစရာ (၂)။
ဂျပန်ပြည်မှ သင်ယူစရာ (၁)။
“ဒီဟာ၊ ဟိုဟာ၊ ဟိုးကဟာ” တွေကို ဂျပန်လို ပြောကြမယ်။
ကဲ- လေ့ကျင့်ဖို့ကတော့ သင့်တာဝန်ပဲနော်။
UNIT3THE MOON: A NICE PLACE TO VISIT
A Very Important Essay for Grade 11 (11)
会 ၏ အသုံးပြုပုံအမျိုးမျိး။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၃၆ ။
စိုးသူ ရဲ့ “ကြည်ဖြူပါ မေရယ်”
မျိုးပြ စကားလုံးများ - 张
ဒီနေ့အတွက် တရုတ်စာလုံး- 房
ဒီနေ့အတွက် တရုတ်စာလုံး- 取
ဒီနေ့အတွက် တရုတ်စာလုံး - 好
ဒီနေ့အတွက် တရုတ်စာလုံး- 毯
ခင်ဗျား ဘာလူမျိုးလဲ၊ ဘယ်နိုင်ငံသားလဲ။
ပြိုင်ကြမယ်ဟေ့- Listening Test (21)